Zvipfeko zvemvura → Kushanda mbatya • P & M machira emakomputa
Nguo dzemvuraiyo yatinokupa mune yedu shopu yakagadzirwa nemhando yepamusoro yakasimbiswa zvinhu zvinosangana nemitemo yakasimba uye zviyero. Iyo ndeimwe yemhando dzezvipfeko zvinozivikanwa kwazvo munguva yematsutso uye nguva yechando, padhuze nedehwe rinodziya uye sweatshirt akasununguka.
Certified mvura mbichana
Rainwear yakakamurwa kuita akati wandei kuita kuti kutsvaga kuve nyore. Iyo assortment yatinopa inogona kushandiswa mumaindasitiri mazhinji. Yakakura sarudzo uye yemakwikwi mitengo inokutendera iwe kuti uwane chaiyo chigadzirwa.
Onawo: Computer embroidery - chii icho?
Mhando dzakasiyana dzemamore emwaka wese nemaindasitiri
Mvura inonaya inodzivirira mvura nekuda kwematanho emukati akagadzirwa kuti mushandisi agadzikane uye akasununguka.
Isu tinopa: maseti, majasi, majaketi, bhurugwa, ponchos. Iyo inonyanya kufarirwa maseti anofambisa sarudzo nekusunungura kudiwa kwekusarudza zvinhu zvega. Isu tinopa akasiyana akasiyana saizi, pamwe neyepasi rose saizi zvipfeko.
Inoisa yakagadzirwa nezvinhu zvinogadziriswa. Iyo seti inosanganisira, pakati pevamwe kubva kuma dungaree nemajaketi. Ivo vanopa chengetedzo izere kubva kuunyoro - inochengetwa pamatanho ekunze, uye zvimwe zvinhu zvakadai semaputi akavharwa zvinobatsira kuchengetedza zvinhu zvakavanzika kuti zvisanyorove. Miti inonaya mvura inobvumira kuyerera kwemahara kwemhepo, izvo zvinodikanwa kudzikisa njodzi yekudikitira zvakanyanya.
Nguo majasi anonaya anopa chengetedzo yakakwana kubva kunyoro nekuda kwekushandisa kwezvinhu zvemhando yepamusoro. Iko kushandiswa kwezvinhu izvi kunoshandura mukusarudzika kusimba uye yakanyanya kuramba kukuvara. Iko kupihwa kunosanganisira akawanda mamodheru - kubva mutete kune mashoma zlotys kusvika kudhura uye kusimba necuffs, yakawanda inopesana ne deformation.
MaJaketi raincoats idhipatimendi rine huwandu hwezvigadzirwa kubva kune vakanakisa vagadziri veavo vanhu vanoisa pfungwa pakutsungirira nekushandisa zvakanyanya. Mabhachi anosangana nematanho mazhinji, mamwe mamodheru akagadzirwa nezvinhu zvinojekesa zvinovandudza kuoneka nekuchengeteka. Kunyanya kucherechedzwa mamodheru anochinjika ayo anopa kunyaradzwa kuzere mumamiriro eakakosha chiitiko chemuviri.
Kudzivirirwa kubva kune zvekunze zvinhu
Kushanda mbichana, iyo iwe yaunowana muchitoro chedu, inopa chengetedzo huru pamvura kana mhepo. Kubatsira kwayo kukuru ndiko kunyaradzwa kwekushandisa, izvo zvisingarambidze rusununguko rwekufamba. Saizi yakakodzera inobvumidza mafambiro asina matambudziko panguva yebasa kana chimwe chiitiko. Izvo zvakafanira kutarisisa kune kwakanyanya kugadzikana uye kuramba kukuvara. Kugadzirwa kwembatya nemakambani anoshanda mukumisikidza kweanokosha machira evashandi kunovimbisa kuyerera kwemhepo kwakakodzera, nekudaro kuchideredza njodzi yekudikitira. Kutenda kune izvi zvivakwa, kuwanda kwekutenga mbatya nyowani kwakadzikiswa.
allegro rainwearcastorama mbichanadecathlon mvuramudhudhudhu mvurazvipfeko zvisina mvuramudhudhudhu mvurambatya dzekuvhima dzisina mvuramvura inodzivirirazvipfeko zvebindu zvisina mvurambichanarainwear allegrozvipfeko zvevakadzi zvemvuradecathlon mvuramvura inonaya yevanambatya dzemvura kune vanofamba nemidhudhudhuzvipfeko zvevanarabha rainwearmbichana mvurarainwear Koszalinrainwear Krakowmudhudhudhu mvuramudhudhudhu mvurarainwear yemidhudhudhubhasikoro rainwearmvura inonaya yehoverainwear yeiyo sikutarainwear prokushanda rainwearallegro basa rainwearvakadzi basa rainwearkunze kwekunze kunayakuredza zvipfeko zvemvurazvipfeko zvemautopvc inonayambatya dzekushanda mvura bhachikushanda mbatya jasi remvuramvura isinganayezvipfeko zvemitambo zvisina mvurazvipfeko zvekuredza zvisina kunayazvipfeko zvemautopros rainwearmudhudhudhu mvuramvura isinganayekushanda rainwear
5 / 5 ( 16 mavhoti )